धरान । धरान १० मा रहेकाे विजयपुर हस्पिटलमा सोमबार पित्तथैलीमा भएको पत्थरीको अप्रेसन गरिएकी इटहरीकी ३१ बर्षीया दीपा राईकाे भोलीपल्ट शरीरभित्र रक्तस्राव भई मृत्यु भएको थियो । मृतक दीपा राईको पोष्टमार्टम अझै पनि भएको छैन ।
मृतक पक्षका अनुसार हस्पिटलकाे प्रशासनसंग घटनबारे छलफल भइरहेको जनाए। अस्पतालभित्रै दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेकाे अवस्थामा अस्पतालकाे मुलगेटमा प्रहरीले कडा सुरक्षा दिएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतका अनुसार आज मृतकको पोष्टमार्टम गर्ने भनिए पनि मृतक पक्षले नमानेको कारण पोष्टमार्टम नभएको हो । मृतक पक्षका टाेलिहरू हस्पिटलमा प्रशासनसँग कुरा गर्ने भनेर गएका उनले बताए ।
साेहि अस्पतालका डा. गजेन्द्रप्रसाद दासले मृतक राईको अप्रेसन गरेका थिए । अप्रेसन पस्चात शरीरमा निरन्तर रक्तस्राव बढेकाे र अन्तिम समयमै मात्र उनले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर नगरेकाे कारण राईकाे मृत्यु भएको भन्दै मृतक पक्षले डा. दासविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् ।